Izimangaliso zobukhazikhazi abaMnyama / base-Afrika: ngemicabango yabo, ubuhle obuMnyama / base-Afrika bukhuthaza njengamatshe ayigugu, baphefumula ngokubonakala kwabo ... (VIDEO)
Zindla ngesinye isikhathi ngalesi sithombe esihle: uzokuqonda ukuthi ukuze kudlule impilo, kukhanye kudlule, nemifudlana yasezulwini, kumele sibavulele indlela, okungukuthi, bavule ngemicabango emihle, njengamatshe asobala. "Konke okusemvelo kugcizelela lo mthetho".
Kodwa kungani amatshe ayigugu abaluleke kangaka? Ngoba anemibala, kunjalo, kodwa ngaphezu kwakho konke ngoba icacile: bavumela ukukhanya (...). Imvelo ikwazile kanjani ukusebenza kahle kangaka kumaminerali athile, ukuwahlanza, ukuwacwebisa ukuze awenze izimangaliso esizithandayo namuhla? "I-Crystal, idayimane, isafire, igolide, i-emerald, itopazi, irubhu (...) yizimangaliso ezingenakusebenza. "
Futhi uma imvelo yaphumelela, kungani uMuntu Black / Afrika ubani onomoya waphezulu wayengeke aphumelele ukwenza lo msebenzi ofanayo uqobo?